क्युबाको स्वास्थ्य प्रणाली संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक
जीवनशैली : स्वास्थ्य
क्युबाको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संसारमै उत्कृष्टमध्येको एक मानिन्छ । अचम्मको कुरा त देशको वार्षिक औसत आय ७८२ डलर (नेपालको ८१२ डलर छ) भए पनि क्युबालीहरूको स्वास्थ्य अतिविकसित देशको बराबर नै छ ।
अनि विश्वव्यापी महाव्याधिका बेलामा क्युबाले पीडित देशहरूमा आफ्ना चिकित्सक पठाउने गर्छ । अहिले इटलीमा क्युबाका चिकित्सकहरूले कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका छन् ।
क्युबामा राम्रो तालिमप्राप्त तथा गुणस्तरीय चिकित्सकहरू छन् र तिनले देशको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा काम गर्न पाउँछन् ।
अहिले कोरोनाभाइरसको महाव्याधि चलिरहेको बेलामा पनि क्युबाली चिकित्सकहरू मानिसको घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण तथा सचेतना अभियान गरिरहेका छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म १५ जनाको मात्र कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ ।
क्युबाको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र अन्य देशको प्रणालीमा भएको भिन्नताको कुरा गर्दा क्युबामा स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकार मानिन्छ र त्यहाँको संविधानमै त्यसको प्रत्याभूति गरिएको छ । उता अमेरिकामा चाहिँ बिरामीलाई ग्राहकको जस्तो व्यवहार गरिन्छ र त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै महंगो छ ।
क्युबाको क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधाराले सरकारलाई नै राम्रो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने अभिभारा सुम्पेको छ ।
क्युबाली चिकित्सकहरू रोग शुरू हुनुभन्दा अगावै रोकथामका औषधि दिन थाल्छन् । अनि रोग लागेमा उनीहरू त्यसलाई बल्झिन नदिनका लागि प्रयास गर्छन् । नागरिकहरूले चिकित्सक भेट्दा लाग्ने खर्चको चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन किनकि उपचार निःशुल्क गरिन्छ ।
क्युबामा प्रत्येक १५० नागरिकका लागि एक चिकित्सक उपलब्ध छन् जुन विकसित मुलुकहरूको भन्दा निकै बढीको अनुपात हो । तर यस अनुपातका कारण चिकित्सकहरूको तलब थोरै हुने गरेको भनी आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन् ।
मानवीय मिसन अन्तर्गत विदेशमा गएर काम गरेमा चिकित्सकहरूले बढी तलब पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले क्युबाले सन् १९६३ देखि यस्ता मिसनमा चिकित्सकहरूलाई पठाउने गरेको छ । अलि पुरानो आँकडा हेर्दा सन् २०१५ मा ३७ हजार क्युबाली चिकित्सकहरू संसारभरिका ७७ देशमा काम गरिरहेका थिए ।
व्यापारमा अमेरिकी प्रतिबन्ध भोगिरहेको क्युबामा चिकित्सकहरूले भित्र्याउने विदेशी मुद्राले क्युबाली सरकारलाई निकै राहत दिने गरेको छ । त्यसैले पनि होला शायद क्युबाले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनलाई निकै जोड दिने गरेको छ ।
तोरीका फाइदा - क्यान्सर कोष वृद्धि रोक्नेदेखि हृदयघ...
तुलसीको पातका यी फाइदाहरू थाहा पाउँदा छक्क पर्नुह...
नरिवलको तेलका फाइदा थाहा छ तपाइँलाई ? थाहा पाउन...
राति कामुक सपना देख्नुहुन्छ? यस्ताे हुनसक्छ कारण
कोरोना संक्रमणमा किन हुन्छ कसैलाई गाह्रो, कसैलाई सजिलो ? – डा. रवीन्द्र पाण्डे
मंसिर ११, २०७७
सञ्चालनमा नआउँदै रेल्वेका १७ हजार थान क्लिप चोरियो, फलाम चोरेर कबाडमा बिक्री !
म्याराडोनाका चिकित्सकमाथि भवितव्य हत्याको अनुसन्धान गरिँदै
धनगढीको कोरोना अस्पतालमा उपचाररत १ पुरुषको मृत्यु
राष्ट्रपति बाइडनले यसरी रचे इतिहास, यी महिलालाई मात्रै मौका
कुकुरसँग खेल्दै गर्दा जो बाइडनको गोडामा चोट
घुम्नै पर्ने ठाउ, जहाँ पोखिन्छ मकालुको छाया
पाल्पाको तानसेन नगर र काठमाडौंको भित्री सहरी क्षेत्रका आचरण धेरै मिल्छन् — मेयर शाक्य
नेपाली सेनाको सैन्य दर्जाको परीक्षा दिन खोज्ने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ